သွားပေါက်ဖြစ်ခြင်း | Page4| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
သွားတွေပျက်စီးတဲ့အတွက် အခေါင်းပေါက်ဖြစ်လာပြီး ဒီအခေါင်းပေါက်က အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ကြီးပြီးပိုနက်လာပါတယ်။ သွားအခေါင်းတွေက သွားပိုးစားခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပြီး အခေါင်းပေါက်ဖြစ်လာရင် ဖာရပါတယ်။
အဓိက,ကတော့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကြောင့်ပါ။ ပါးစပ်ထဲက ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကြောင့် အက်ဆစ်တွေဖြစ်လာကာ ဒီအက်ဆစ်တွေသွားမှာကပ်ပြီး သွားရဲ့အပေါ်ဆုံးအလွှာဖြစ်တဲ့ ကြွေလွှာကို တိုက်စားပစ်လိုက်ပါတယ်။
အချိန်ကြာလာပြီဆိုရင် ဒီအက်ဆစ်တွေက ကြွေလွှာကတစ်ဆင့် အထဲရောက်ပြီး သွားအတွင်းပိုင်းကို တိုက်စားလိုက်ပါတယ်။ သွားတွင်းထိရောက်ပြီး အာရုံကြောကိုထိရင်တော့ သွားကိုက်ခြင်းခံစားရပါတယ်။
သွားဆရာဝန်က သွားကိုသေချာစစ်ဆေးပြီး X-ray ရိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သွားအခေါင်းတွေ့ရင် သွားရဲ့ဆွေးမြေ့နေတဲ့အပိုင်းတွေကို ဖယ်လိုက်ပြီး အပေါက်ကိုပြန်ဖာပေးပါလိမ့်မယ်။ အနာသက်သာစေဖို့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
1. အစာစားပြီးတိုင်း (သို့) အနည်းဆုံးတစ်နေ့နှစ်ကြိမ် ဖလူအိုရိုက်ပါတဲ့သွားတိုက်ဆေးနဲ့ သွားတိုက်ပါ။ ညအိပ်ရာဝင်ချိန်ကတော့ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။
2. သွားကိုအပေါ်၊ အောက် ၊ အတွင်း အကုန်တိုက်ပါ။
3. သွားဖုံးတွေသန့်ရှင်းစေဖို့ ညင်သာစွာ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။
4. သွားကြားထဲမှာ အစာအကြွင်းအကျံတွေ ဖယ်ရှားဖို့အတွက် သွားပွတ်ကြိုးနှင့် တစ်နေ့တစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းပါ။
5. ဆိုဒါ၊ ဖျော်ရည်ကဲ့သို့သော ချိုပြီးသကြားပါတဲ့ဖျော်ရည်တွေ အရမ်းမသောက်ပါနှင့်။
6. သွားဆရာဝန်နှင့် တစ်နှစ် နှစ်ကြိမ် ပုံမှန်သွားစစ်ဆေးပါ။
ပီကယ် ဝါးတတ်သူများ ကင်ဆာ သတိထား
၂၀.၅.၂၀၁၉ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
E171 ဆိုတာ ဘာလဲ။
ပ်ီကယ်မှာပါဝင်တဲ့ အဖြူရောင်ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတုဓာတ်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဓာတုပစ္စည်းဟာ အစာအိမ်၊ အူနဲ့ အူသိမ်တွေက ဘက်တီးရီးယားတွေကို ပြောင်းလဲစေပြီး အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်စေပါတယ်လို့ သုတေသနတွေ ထွက်ရှိထားပါတယ်နော်။
တင်ပါး (သို့) ခြေထောက်တစ်ဖက် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း (Sciatica)
၁၉.၅.၂၀၁၉ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရှည်ဆုံး၊ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Sciatic Nerve လို့ ခေါ်တဲ့ အာရုံကြောတစ်ချောင်း ရှိပါတယ်။ ဒီအာရုံကြောက ကျောရိုးကနေ ထွက်လာပြီးတော့ တင်ပါးကို ဖြတ်ပြီး ခြေထောက်တစ်လျှောက် သွားပါတယ်။ ဒီအာရုံကြောတစ်လျှောက် နာကျင်မှု ခံစားရတာကို Sciatica လို့ ခေါ်ပါတယ်။